Bit By Bit - Ikamva - 7.2.3 Ethics kuyilo kuphando
Ethics uza evela yinkxalabo peripheral ukuba yinkxalabo engundoqo ke ngoko uya kuba isihloko sophando.
Kweli phakade yesuntswana, yokuziphatha-ngaphezu iindleko-iya kuba ngumqobo lubalaseleyo kwi abaphandi. Oko, kwixesha elizayo, siya nzima kangako yintoni enokwenziwa kwaye kakhulu ngoko kufuneka kwenziwe. Njengokuba kunjalo, mna silindele ukuba indlela imigaqo-based ntle kunye nendlela iNethiwekhi yeThutyana izazinzulu data luya kuvela kubo into efana nemigaqo-based waya kuchaziwe kwiSahluko 6 nam silindele ukuba nesimilo uba uphando yabalasela ngakumbi sinyanzelo, iya kuba isihloko sophando ngokwayo. Kwi ngendlela efanayo ukuba abaphandi zentlalo ngoku sebenzisa ixesha namandla nokuphuhlisa iindlela ezintsha eyenza iingqikelelo zitshiphu lichanile, ndiya silindele ukuba uya kusebenza ukuphuhlisa iindlela ukuba nemikhwa leyo kakhulu uxanduva. Olu tshintsho luza kwenzeka nje kuba abaphandi abakhathalele yokuziphatha nje kuphela, kodwa nangenxa abaphandi abakhathalele yokuziphatha njengendlela siqhuba uphando lwentlalo.
Umzekelo le ntsingiselo ngophando wabucala umahluko (Dwork 2008) . Masithi, iirekhodi impilo umzekelo, isibhedlele uye ezineenkcukacha nabaphandi ufuna ukuqonda iipateni kuloo data. Nangokwahluka algorithms zabucala ukwenzela ukuba abantu ukuya kubuza iirekhodi impilo ukufunda iipateni aggregate (umzekelo, abantu abatshaya kungenzeka ukuba babe nomhlaza) ngeli xa lunciphisa ubungozi wokufunda nantoni na malunga iimpawu nawuphi na umntu othile. Ukuphuhlisa ezi hlobo algorithms zabucala-ukulondoloza iye kwindawo esebenzayo wophando; ukubona Dwork and Roth (2014) ukulungiselela unyango incwadi-ubude. zabucala umahluko ngumzekelo kuluntu lophando yokuthatha mngeni yokuziphatha, ibe iprojekthi yophando Wajika ke, size ke senze inkqubela kuyo. Lo ngumzekelo ndicinga siza kubona kakhulu kwezinye iinkalo zophando lwentlalo.
Njengoko amandla labaphandi, ngokufuthi ngokusebenzisana neenkampani kunye noorhulumente, qhubeka ukwanda, kuya kuba nzima ukuba ukuphepha izinto ezintsonkothileyo ezisesikweni. Iye ibe ngamava am ukuba izazinzulu ezininzi zentlalo izazinzulu data ziwabona la miba yokuziphatha njengoko mgxobhozo ukuba iphetshwe. Kodwa, ndicinga ukuba nokuphepha iya isanda yemeko njenge sicwangciso. Thina, beliqela, ezakujongana isombulule iingxaki kuphela xa atsibatsibe ngaphakathi ekumelaneni kunye ubuchule kunye nomgudu ukuba isicelo nezinye iingxaki zophando.